WAR DEG DEG: Qarax 2 aad oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo (Daawo Sawiradda) – STAR FM SOMALIA
WAR DEG DEG: Qarax 2 aad oo ka dhacay Magaalada Gaalkacyo (Daawo Sawiradda)
Iyadoo Magaalada Gaalkacyo uu ka dhacay Qarax aad u xoogan oo si weyn looga maqlay guud ahaan Magaalada Gaalkacyo, ayaa goor dhaweyd waxaa halkaasi ka dhacay Qarax labaad oo sida la sheegay gaari loo adeegsaday.
Qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay Afaafka Xarunta Dowladda hoose ee Magaalada Gaalkacyo, kadib markii dad badan ay isugu soo yaaceen halkaasi, kuwaasi oo eegayay qaraxa koowaad ee dhacay.
Khasaare xoogan ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhashay qaraxa labaad oo sida isna la sheegaayo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Ilaa hada Ma cadda rasmi ahaan Khasaaraha inta uu la eeg yahay, balse dadka reer Gaalkacyo ayaa soo warinaya inuu jiro Khasaare xoogan oo ka dhashay labadaasi qarax.
Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay Suuqa Xero Dayax oo aanan wax badan ka fogeyn Xarunta Dowladda hoose, halka qaraxa labaad uu isna ka dhacay Afaafka hore ee xarunta Dowladda hoose oo dad badan ay ku sugnaayeen.
Ciidamada Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Puntland ayaa dadka ku kala ceyrinaya rasaas xoogan oo ay ridayaan, taasi oo qal qal hor leh ku abuurtay Bulshada.
Guddoomiyaha Maxkamada Sare ee Puntland oo xilka la wareegay
DEG DEG: Qarax xoogan oo laga maqlay magaalada Gaalkacyo